नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): खप्परमा त लिएरै आरहेछन : यि ब्यक्ती नेपालमा जन्मेका भए बाहुन भनेर कती खेदिँदा हुन, झन्डै टर्कीमा जन्मेर बँचेछन बा ! विश्वकै सबैभन्दा लामो नाक भएका व्यक्ति टर्कीका मेहमेट !
खप्परमा त लिएरै आरहेछन : यि ब्यक्ती नेपालमा जन्मेका भए बाहुन भनेर कती खेदिँदा हुन, झन्डै टर्कीमा जन्मेर बँचेछन बा ! विश्वकै सबैभन्दा लामो नाक भएका व्यक्ति टर्कीका मेहमेट !
विश्वकै सबैभन्दा लामो नाक भएका व्यक्ति टर्कीका मेहमेट ओज्युरेक रहेकोे पुष्टि भएको छ । सन् २०१० देखि उनको नाकले नै सबैभन्दा लामो नाकको रेकर्ड राख्दै आएको छ । भर्खरै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्ले नापेअनुसार उनको नाक ८.८ सेन्टिमिटर -३.४६ इन्च) लामो छ ।